विधिहरू, प्रभावकारी तरिकाहरू: घर मा छाला को पन्जा कसरी सफा गर्न
छाला को पन्जा महिला र पुरुष को छवि complements एक ठूलो सहायक छन्। शैलीहरू, रंग र सामाग्री को एक किसिम संग, तपाईं फरक अवसरका लागि उत्पादन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै कुरा उच्च गुणस्तरीय पन्जा छन् कसरी, समय तिनीहरूले फोहोर, तिनीहरूलाई हेरचाह आवश्यक लागि त हुन्छन्। यसबाहेक, यो भित्र र बाहिर लागि आवश्यक छ।
कि माटो नोट र धूलो adversely, उत्पादन असर सफाई नियमित बाहिर गर्नुपर्छ त। यो काम दुवै व्यक्तिगत र विजार्ड को मद्दतले गर्न सकिन्छ। सफा कसरी छाला पन्जा सरल निर्देशनहरू मदत।
म कुन कुरा विचार गर्नुपर्छ?
कृपया कुराहरू राख्नको लागि यी सरल सुझावहरू पढ्नुहोस्:
यो फाल्नु भन्दा सफाई उत्पादनहरु प्रदर्शन गर्न बेहतर: समसामयिक हेरविचार कुरा सुरक्षित गर्न मदत गर्नेछ;
त्यहाँ आफ्नो विधिहरू प्रदूषण सामना गर्न मदत गर्नेछ भन्ने कुनै विश्वास छ भने, यो सुक्खा क्लीनर गर्न उत्पादन दिन राम्रो छ;
यो क्षति उत्पादन को रूप मा, कुरा मात्र माथिल्लो भाग साफ गर्नुपर्छ, र चिस्यान को ingress रोक्न आवश्यकता को गहिरो पत्रहरु मा;
छाला को पन्जा तिनीहरूले deteriorate उच्च तापमान अन्तर्गत रूपमा ironed गर्नुपर्छ।
यी सरल नियमहरू निम्न एक लामो समय को लागि उत्पादन को उपस्थिति राख्न हुनेछ द्वारा। र तपाईं मात्र तरिका सिद्ध भएको कुरा सफा।
सफाई को विधिहरू
यो मास्टर गुणात्मक प्रदूषण को उन्मूलन प्रदर्शन जहाँ सुक्खा क्लीनर, गर्न उत्पादन दिन राम्रो छ। तर सबै छैन पन्जा को फारम बहाल गर्नेछ जो विशेषज्ञहरु, छन्। यो काम सशुल्क छ रूपमा। कसरी घर मा छाला को पन्जा सफा गर्न? सरल निर्देशनहरू काम गर्न मद्दत गर्नेछ। र यो मद्दत संग बारी गर्न:
पाउडर र हाइड्रोजन पेरोक्साइड;
प्रत्येक मध्यम छाला पन्जा कसरी सफा गर्न वर्णन निर्देशन छ। प्रक्रिया पछि, कुरा लामो समय को लागि फेरि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
4 को एक अनुपात मा पानी र अमोनिया मिश्रण गर्न उत्पादन सफा गर्न: 1। एक कपास swab प्रयोग गरेर यसलाई पन्जा मा तरल वितरण गर्न आवश्यक छ। एक कुरा कच्चा हुन सक्छ, तर यो तरल पदार्थ सकिन हुँदैन।
सञ्चालन समयमा, दूषित tampons सफा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसपछि उत्पादन पानी moistened एक कपडा संग सखाप गर्नुपर्छ। चाँडै पन्जा बरामद गर्न, तिनीहरूले सुकाएपछि धारण गर्नुपर्छ। त्यसैले कुरा यसको आकार राख्ने हुनेछ।
को पाउडर र हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आवेदन
यी धन कुराहरू रंग लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। कसरी यसरी छाला पन्जा सफा गर्न? हाइड्रोजन पेरोक्साइड र लाँड्री डिटर्जेंट मिश्रण 1 अनुपात: 1। मिश्रण, बाक्लो हुनुपर्छ अलि पानी वा अमोनिया थप्नुहोस्।
एक कपास swab हालतमा पन्जा लागू हुन्छ, र5मिनेट वस्तु पछि नम कपडा संग साफ गर्न। यो समयमा, यस माटो पूर्ण गायब र उत्पादन ताजा नजर प्राप्त।
साबुन समाधान को प्रयोग
कसरी यसरी छाला पन्जा सफा गर्न? को साबुन RUB र एक सानो पानी थप्न: तपाईं एक साबुन समाधान तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि कुरा तपाईं एक माध्यम र एक सानो दल्नु मा ड्रप गर्न आवश्यक छ।
यो चिस्यान infused उत्पादन रोक्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ। कि पछि, पन्जा पानी मा rinsed गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई राख्न सकिँदैन।
यी शुद्धीकरण पन्जा को विधिहरू साथै अन्य विधिहरू धेरै लागू हुन्छ। सबै भन्दा लोकप्रिय समावेश:
कागति को रस;
उत्पादन शुद्ध गर्न, यो दूध मा भिगो (दूध चम्मच बेकिंग सोडा एक गिलास मा पतला छ) एक swab संग सखाप गर्नुपर्छ। यो माटो, धूलो हटाउन मात्र होइन, तर पनि छाला पोषण दिन्छ। यो कुरा पछि सखाप र आफ्नो हात मा राख्नु पर्छ।
तपाईं एउटा अन्डा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, प्रोटिन को पहेंलो भाग अलग हुनुपर्छ। प्रोटिन बाक्लो फोम सम्म whisk पछि, र साधन छाला लागू गर्न सकिन्छ। केही समय पछि, रहलपहल हटाइयो। शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकाश उत्पादनहरु लागि आदर्श छ।
भित्र र बाहिर कसरी कागति को रस संग छाला पन्जा सफा गर्न? विधि उत्पादन धूलो र माटो बाट हटाउनु गर्न अनुमति दिन्छ। लेमन एक विरंजन प्रभाव छ, त्यसैले यसलाई सेतो पन्जा लागि उपयुक्त छ। सिट्रस संग रस प्राप्त, र त्यसपछि कुराहरू शुद्ध गर्न प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
घर बल्ब मा छाला पन्जा कसरी सफा गर्ने? तरकारी कटौती गर्नुपर्छ, फोहोर ठाउँमा RUB। प्याज गाढा हुनेछ जब, यो कट अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। पन्जा एक नम स्पन्जले संग उपचार गर्नुपर्छ।
फलाम उत्पादनहरु सफाई को लागि तरिका
विशेष विधिहरू कुराको उपस्थिति बचत गर्न अनुमति दिने, छाला रंग प्रयोग गरिन्छ। यसलाई खराब छैन क्रममा, यो तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। रातो छाला पन्जा ब्रेडक्रंब कसरी सफा गर्ने? यो, रोटी मुछ्नु पानी मा भिजेको त्यसपछि फोहोर क्षेत्रमा धेरै धारण आवश्यक छ। 15 मिनेट पछि, रहलपहल एक नम कपडा संग उत्पादन हटाइएको हुनुपर्छ।
कसरी रातो स्प्रे-रंग छाला पन्जा सफा गर्न? यसलाई मानक विधिहरू द्वारा दाग हटाउन सक्षम छैन जब यो विधि प्रयोग गरिएको छ। मात्र उत्पादन को उपस्थिति बिगार्छ छैन ताकि, उच्च गुणस्तरीय उपकरण खरिद गर्न आवश्यक छ। यो निर्देशन पालना गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ।
सफाई उचित पैड
त्यहाँ केवल छाला पन्जा सफा कसरी चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण हो। तरिका र मतलब अस्तर देखि दाग हटाउन छ। उत्पादन गरिएका गर्नुपर्छ र त्यसपछि यसलाई prostirnut गर्न सकिन्छ। पानी को एक सानो राशि संग आवश्यक काम गर्न।
काम समाप्त हुन्छ, तपाईं उनको नैपकिन vymoknut को कुरा प्रेस गर्न आवश्यक छ। यो सुक्खामा बाँकी गर्नुपर्छ।
Whichever विधि, यो कि छाला पानी रुचि छैन विचार हुनुपर्छ चुनिएको छ। तर एकै समयमा, हामी नियमित रूपमा धन मइस्चराइजिंग प्रभाव देखि, जसबाट एक पन्जा को स्थायित्व वृद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ। यो गर्न, हल्का तर वा अरंडी तेल लागू हुन्छ।
यो प्रति रात र राम्ररी सुक्खा उत्पादन गर्न साँझ सफा गर्न उचित छ। यो कुरा को नजर बिगार्छ गर्न सक्छन् यो ताप उपकरण टाढा हुनुपर्छ ड्राई। यो आवश्यक छैन यो केवल अवस्था exacerbate गर्न सक्छन्, untested तरिकामा प्रयोग गर्न छ। हटाइ दूषण को शास्त्रीय विधि प्रयोग गरेर आफ्नो मनपर्ने पन्जा जीवन लम्ब्याउनु हुनेछ।
स्विस हेर्छ दर्जा। को 2013th वर्ष मा डाटा
को मेटाउने मार्कर? छिटो र प्रभावकारी तरिका
पर्खाल-माउन्ट संस्करण: पर्दे लागि पर्दा छड को प्रकार। फोटो
भान्सा चक्कु को चयन
लाँड्री लागि ब्लीच छनौट
अर्को एक राष्ट्र को विलय को प्रक्रिया, को जातीय द्वन्द्व को चरण मा, शान्तिमा वा militarily ठाउँ लिन्छ मात्र हिंसात्मक बाटो, वा मात्र शान्तिपूर्ण सह-सञ्चालनको फारममा?
पूर्ण कुनै पनि जलजीवालय उज्ज्वल र सुन्दर कुखुराको भाले माछा पूरक
चिनी संग बन्स। सरल व्यञ्जनहरु
विषाक्तता संग के गर्ने? बच्चाहरूको लागि पहिलो सहायता।
सुरक्षा। एन्टिभाइरस सफ्टवेयर विस्थापन। एन्टिभाइरस Avast कसरी हटाउने
अन्तर समीकरण - सामान्य जानकारी र कार्यक्षेत्र
साँझ पोशाक। फैशन सुझावहरू
आकार एम लुगा - यो एक ठूलो वा सानो छ?
आणविक भौतिक: जो भविष्यको लागि यो पेशामा!
"आनन्द को Galoshes": एक सारांश। एन्डरसन, "आनन्द को Galoshes"
घरमा mascarpone कसरी तयार
मेक्सिको राजधानी - मेक्सिको को यो राजधानी ... आकर्षण